Mmanụ CBG N'ogbe Site na Trytranquil.net | Ọnụ ahịa kacha mma nke 2022
Kedu ihe bụ CBG Oil N'ogbe?
CBG N'ogbe na-eji usoro sayensị kachasị elu na-ewe ihe ubi CBG. CBG, nke a makwaara dị ka cannabigerol, bụ cannabinoid a na-amaghị ama. A na-ewepụta CBG na osisi cannabis site na okporo osisi ya, ị ga na mkpụrụ ya. CBG bụ acidic precursor molecule nke osisi na-eji mebie THC na CBD. Ọ bụ ihe mmalite, nke pụtara na ọ naghị adịkarị ma na-achọkwu ihe ọmụma na nghọta gbasara kemistri tupu owuwe ihe ubi.
Gịnị kpatara CBG Oil N'ogbe
Anyị nwere njikọ kpọmkwem na Colorado growers na ndị ọkà mmụta sayensị, n'ihi ya, anyị nwere ike inye elu-edu Nnukwu & N'ogbe mmanụ CBG na ọnụ ahịa ọnụ. Mwepụta cannabinoid nke iwu sitere na osisi hemp ga-ekwe omume. Hemp, nwanne osisi wii wii, dị ngwa ngwa ma nwee otu photochemical acid nke na-emepụta ọtụtụ cannabinoids. A na-ebute osisi hemp na obere obụpde na organic (nri dabere) ethylalcool. A na-eji nwayọọ na-amagharị osisi hemp ahụ iji kwalite mmegharị ahụ molekụla na esemokwu eke n'oge obụpde obere okpomọkụ a. Nke a na-emepụta vepo nke na-emezi kristal ma gbanwee n'ime ogige a chọrọ, cannabinoid.
Nnyefe ọnụọgụ dị iche iche
Ọnụ ego CBG
Enwere ike ịchekwa ego ọ bụla CBG n'ebe a na-eto eto. Anyị ga-ejupụta usoro ọ bụla wee gaa ogologo oge iji nweta ngwaahịa gị.
Ogo kacha mma
A na-emepụta ngwaahịa niile na Denver Environmental Health Compliant Facilities. Anyị na-agbaso iwu niile nke ụkpụrụ gburugburu ebe obibi, ahụike na nchekwa weputara iji nye usoro mmịpụta hemp kacha mma.
Tinctures nwere ike ịhazi ya
Anyị na-enye usoro ọgwụgwọ CBC dị iche iche, site na 500mg ruo 3000mg. Enwere ike ịhazi Tinctures anyị na agba na akara.
Ọnụ ahịa mmanụ CBG na-enye mgbakwunye ọgwụ
National Institute of Health egosila na CBG na ezinụlọ cannabinoid ya ka egosipụtara na-ebelata nchekasị, nchekasị na ịda mbà n'obi. Ọtụtụ nchọpụta egosila na wii wii ọgwụ nwere ọtụtụ uru ahụike. E gosipụtara CBG n'ọmụmụ ihe iji belata mgbaàmà glaucoma ma melite nrụgide anya ( isi iyi). Mụtakwuo maka uru ahụike nwere ike ịdị na CBG, gụnyere ibe 50+ nke akọwara wee kpọtụrụ ya na ọmụmụ ahụike.
Nlekọta ọnụ nke cannabinoid mmanụ egosila na ọ na-enye nnukwu nguzozi n'etiti enyemaka ngwa ngwa na nkwụsị ogologo oge site na nchekasị na mgbu. N'ihi na ọ na-agwakọta ya na mct aki oyibo mmanụ anyị niile-organic mmanụ nwere ọtụtụ magburu onwe ogige dị ka terpenes na omega-3 fatty acid, amino acids, chlorophyll na vitamin. A na-emepụta ngwaahịa niile na nchekwa nchekwa ahụike Denver. Anyị na-erube isi n'iwu niile nke ụkpụrụ gburugburu, ahụike na nchekwa tọhapụrụ. Nke a na-enye anyị ohere ịnye usoro mmịpụta hemp kacha mma yana hụkwa na ụlọ ọrụ anyị enwetara ikike nnabata ahụike gburugburu ebe obibi.
Mbupu nke cbg n'ogbe gaa na mba ndị ọzọ
Trytranquil.net na-ebufe nnukwu mmanụ CBG, CBD & Delta 8 THC mmanụ n'ọtụtụ mba ọzọ, gụnyere Germany, Israel, Russian, Croatia, France, Greece, Hungary, Mexico na ndị ọzọ! Kpọtụrụ onye na-ere ahịa taa maka ọnụ ahịa ngwaahịa na nhazi mbupu.
Ụlọ nkwakọba ihe nke CBG Mmanụ
Anyị nwere ngwaahịa na ụlọ nkwakọba ihe anyị ma nwee ike hazie mmanụ CBG ọ bụla n'ihi ịbụ ụlọ ọrụ guzosiri ike yana ndị ahịa na-emeghachi ya. Soro ezinụlọ ndị ahịa anyị wee chọpụta uru nke mgbakwunye CBG maka izu ike na ịdị mma.
Pịa ebe a ka ịtụ CBG N'ogbe